Marc Ravalomanana : Omaly tsy miova! -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Omaly tsy miova!
10/10/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Marina loatra ny nambaran’ny mpanara-baovao hoe « tsy hiova mihitsy izany Marc Ravalomanana izany ». Heverin’ity filoha tale jeneralin’ny orinasa TIKO it,y fa azy avokoa izao rehetra izao: Antananarivo, Madagasikara, JIRAMA ary ny volam-bahoaka, sns.
Rehefa mila fiaramanidina ny tenany fa tsy te handeha amin’ny Air Madagascar, dia noterena namoaka ny vola ny fanjakana nividianana ny Air Force One II. Koa satria sarotra ny mitady tany midadasika ahafahana manangana orinasa, dia nalaina ny tany miaramila sy ny tanim-panjakana, ary nototofana ny tanimbarin’olona ho an’ny orinasa TIKO sy MAGRO. Nahasorena an-dRavalomanana Marc ny nifampiraharaha tamin’ireo tantsaha mpiompy omby be ronono, dia navoaka ny volan’ny minisiteran’ny Foloalindahy nividianana omby vavy be ronono avy tany Nouvelle-Zélande. Koa satria ny vadiny no ben’ny tanànan’Antananarivo, dia tsy maintsy tendrena ho tompon’andraikitra ao amin’ny CUA i Marc Ravalomanana.
Izao indray koa dia lasa heloka izany manery ny orinasa TIKO handoa faktioran’ny JIRAMA izany, fahotana mahafaty ny manapaka ny jiro sy ny ranon’ny orinasa TIKO any Andranomanelatra, tahaka ny hoe fananan-dRavalomanana Marc mivady ny orinasa JIRAMA. Tsy vitan’izany fa lasa heloka ihany koa ny mitaky ny hetra tokony haloan’ny orinasa TIKO sy ny fanakatonana azy noho ny tsy faneken’ny tompony hanefa izany satria azy mivady koa angamba no fiheverany ny sampandraharahan’ny Hetra.
Izay fitiavan-tena diso tafahoatra izay ihany anefa no nahatonga ny raharaha 2009. Natao ampihimamba avokoa ny sehatra rehetra: famokarana sy ny fanodinana vokatra azo avy amin’ny ronono, ny sehatry ny vary, ny zezika, ny menaka, ny lafarina, hatramin’ny asa vaventy, ka nanangana ny ALMA. Ho an-dRavalomanana Marc izany raha fehezina ny resaka dia azy avokoa ny zava-drehetra: fony filoham-pirenena, dia azy mivady i Madagasikara, rehefa lasa ben’ny tanàna ny vadiny dia azy mivady Antananarivo, rehefa eo amin’ny sehatry ny fandraharahana , dia tsy azo hampiharina ny lalàna mifehy ny asa fandraharahana. Fehiny, tsy hiova na oviana izany mihitsy i Marc Ravalomanana!
ny adidy amin’ny maha olom-pirenena azy. Aza hadinoina fa adidy amin’ny maha olom-pirenena izany mandoa hetra izany